Akpado osisi maka okooko osisi onwe ya
Ndị na-agbapụta osisi ndị na-emepụta ihe na-eme ka ụlọ ha ghọọ ụlọ griin - ite na okooko osisi n'ebe niile. N'ime oge, ị ga-ahụ ihe ndị na-esi na mmiri pụta, nke dabara na arịa ụlọ mgbe ị na-akụ mkpụrụ - arịa si na chipboard bụ ntụpọ, na akwụkwọ ahụaja nwere stains, ma na windo sills bụ stains. Gbanwee nsogbu nke ịbanye n'ime ụlọ dị iche iche na ụlọ ndị na-esi ísì ụtọ ga-enyere shelves maka okooko osisi, nke e gosipụtara n'ọtụtụ dịgasị iche iche n'ụlọ nkwakọba ihe ọ bụla. A ga-enye gị anya iko dị mma , ma n'ime ime ụlọ ịwụ ma ọ bụ osisi mgbaaka osisi, osisi ma ọ bụ mara mma nke e wusiri ike, mgbidi ma ọ bụ ụlọ ala maka okooko osisi . Enwere otutu nhọrọ nke okike - dika imaatu, ihe obula maka agba na onwunwu. N'agbanyeghị na ụdị nhọrọ ndị dị otú ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụsị ịmepụta ihe ndọtị maka aka aka gị - naanị, iji nwayọọ na obi dịkwuo n'anya karị.
Kedu otu esi eme ihe nchekwa osisi maka okooko osisi?
Ihe anyị na-enye gị ka ịmepụta abụghị naanị ihe edozi maka okooko osisi, mana ọkpụkpụ dị iche iche nke nwere ike ịme ihe niile. Akwa gbakwunyere bụ na ite ndị a ga-adị nso. Ejiri a mejupụtara ala n'elu ala n'elu ụkwụ anọ na shelves anọ, nke a na-ejide na chrom racks. Ya mere, ka anyi malite!
Maka ịmepụta ihe anyị chọrọ ihe ndị a na ngwaọrụ ndị a:
plywood na oke okpukpu 15 mm, nke a na-emetọ mmiri;
akwara chrome nke usoro ihe omuma (dayameta 25 mm) na nggogwu 510 cm;
ụyọkọ maka ọkpọkọ nke usoro Joker (17 pcs.);
Ngwongwo ụkwụ (4 pcs.);
ogbugba na eri (5 PC).
kposa na kposara;
Ntu ụlọ (5 PC).
ihe na-acha bọlbụ-auto-enamel nke ụcha achọrọ;
tinyety na osisi;
jig hụrụ maka curvilinear bee;
otu ígwè ma ọ bụ onye na-akpụ ụzụ;
screwdriver na drill;
Nzọụkwụ mbụ bụ akara nke nkesa nke shelf na plywood. Iji mee nke a, i nwere ike iji nkocha zuru ezu nke ihe edozi. Anyị na-ahụ akụkụ ahụ na jigsaw ma na-egbutu spili.
N'okpuru ala dị n'okpuru, anyị na-ede ebe ndị a na-ahụ maka ihe ndị e ji ebu ụlọ ma na-atụgharị oghere. Na ihe ndị ọzọ dị n'usoro anyị na-atụle isi ihe ndị dị na flanges. N'ebe ndị a na-etinye ntanye ọkụ, anyị na-asọpu oghere na nkeji 25 mm.
Sl shlyklyuem, nke mere na enwee ike imebi ihe. Mgbe anyị na-ehichapụ ihe na-etinye ya, anyị na-atụgharị n'elu ya na ezigbo sandpaper. Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-ese eserese ahụ, na-etinye perosol agba na ọkwa abụọ. Mgbe agba a kpochapụrụ kpamkpam, ọ ga-ekwe omume ịgbakwunye na nsọtụ nke shelves n'ọdịnihu a na-achọ na-adaba na agba nke tubes.
Ihe na-esote na-arụ ọrụ na tubes. Iji chịkọta ihe oriri anyị na-achọ mma anyị chọrọ akpa 5 - otu tube nke 60 na 90 cm n'ogologo, dịka nke ọzọ, na okpukpu atọ nke 120 cm n'ogologo. Anyị nwere ike belata ígwè ahụ na wiil ma ọ bụ onye na-akpụ ụzụ, nke, n'adịghị ka ọkpụkpụ, ga-ahapụ ọbụna n'ọnụ.
Oge kachasị mkpa bụ nzukọ nke usoro ahụ. Mbụ, ịkwesịrị ịdebe mkpuchi niile dị n'elu ala. Anyị na-etinye flanges na racks na-ekpuchi ya na kposara na isi.
Site n'otu ụkpụrụ ahụ, anyị na-edozi ndị ọzọ na-esonụ nke imewe anyị, ebe dị anya n'etiti 30 cm.
Mgbe ị rụchara ọrụ na shelves, dozie ihe eji akwado ụlọ (ma ọ bụ wiil) n'elu ikpo okwu ala nke usoro.
Onye edemede nke echiche na ihe oyiyi Vladimir Grek (http://www.enkor.ru/forum/viewtopic.php?t=4610)
Ihe nchekwa maka okooko osisi site aka aka - nhọrọ maka umengwụ
Ihe nchekwa osisi maka okooko osisi na ụdọ bụ ihe dị nnọọ mfe. Maka nke a, anyị nwere ihe ndị na-esonụ:
eriri ọkpụrụkpụ nke 20 mm;
ndị na-egwupụta osisi.
Akpa, ịkwesịrị ịkwadebe osisi - ịkwesịrị ikpuchi ihe na-adịghị ahụkebe, ájá ya, kụọ oghere maka ụdọ ma kpuchie mbadamba ahụ na agba nke agba a chọrọ.
A na-eke eriri ahụ n'ime ụzọ abụọ hà n'ogologo. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịdọrọ site na oghere, a na-ejikọta na nsọtụ na teepu. Anyị na-adọpụ eriri ahụ, site na ala ala, na n'elu anyị na-ahapụ nnukwu ntụpọ zuru oke, nke usoro nchịkwa n'ọdịnihu ga-agbatị.
Ịhapụ nkwụsị dị mkpa n'etiti etiti ndị ahụ, na-agbanye ụdọ n'ime eriri ahụ. N'okpuru eriri ntụpọ ala. Ihe dị otú ahụ a na-edozi na-edozi ahụ ga-abụ otu ihe mara mma maka ụlọ dị ka osisi n'onwe ha.
Mee ka tile n'okpuru nkume
Kedu otu esi eme ihe njiko?
Ezie mgbidi site na plastaboard
Kitchen na ime ụlọ ọnụ - imewe
Ezigbo akwa ụmụaka
Scandinavian ịke akwa akwụkwọ ahụaja
Katie Holmes ji wig mee ihe nkiri ya "ihe niile anyị nwere"
Kedu ka esi ghee boletus?
Kabeeji na-eji anụ na osikapa apụta
Mgbidi na-ekpuchi ihe igwe
Ndị uwe si cashmere - mgbụsị akwụkwọ 2013
Esi lekọta tomato n'ime griin ha - ihe omimi nke owuwe ihe ubi
Tartlets na tebụl oriri
Obere ngwa ndakwa nri
Azu si anụ ezi - ihe kachasị ụtọ nke ntụziaka nke Tatar
Lymphadenopathy nke n'olu
Ụgbọala ụgbọ ala na Nizhny Novgorod
Eji eji aka gị na-ebu efere
Paracetamol maka inye nwa
Kedu otu esi ahọrọ akwa linin?